यी ३ राशिका महिला हुन्छन् आकर्षक साथै ज्ञानी पनि! प्रेममा दिदैनन् कहिले पनि धोका!! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यी ३ राशिका महिला हुन्छन् आकर्षक साथै ज्ञानी पनि! प्रेममा दिदैनन् कहिले पनि धोका!!
यी ३ राशिका महिला हुन्छन् आकर्षक साथै ज्ञानी पनि! प्रेममा दिदैनन् कहिले पनि धोका!!
ज्योतिष शास्त्रमा जम्मा १२ वटा राशी हुने गर्छन। हरेक राशिको हरेक प्रकारको गुण साथै भाग्य रहने गर्दछ। हरेक व्यक्तिको गुण फरक रहने त भैहाल्यो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हरेक राशिका पुरुष र महिलाहरुको प्रकृति र भविष्य फरक हुन्छ। प्रेम जीवनमा समेत ग्रहले असर पर्ने हुँदा आफ्नो लागि उपयुक्त्र प्रेमी खोज्न पर्ने हुन्छ। पुरुषले खोजे जसतै गुण भएका महिलाहरु विशेषतः निम्न ३ राशीका रहेको छन्।
वृष राशि ( नाम अक्षर- ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो) १. वृष राशी भएका महिलाको व्यक्तित्व निकै आकर्षक हुने गर्दछ। जसका कारण पुरुषहरु छिट्टै आकर्षित हुने गर्छन्।२. मिहेनतको मामिलामा वृष राशी भएका महिलाहरु अगाडी रहने गर्छन भने जाँगर भएका कारण पुरुषको रोजाईमा छिट्टै पर्ने त भैहाल्यो।३. वृष राशी भएका महिलाहरु सौंदर्य प्रेमी साथै कला प्रेमी भएका कारण जो-कोहीको नजरमा पर्न सफल रहने गर्छन्।
मिथुन राशि (का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, हा) १. मिथुन राशी भएका महिलाहरु सुन्दर र आकर्षक व्यक्तित्वमा धनी हुनुका साथै व्यावहारिक रहने भएका कारण जो-कोहि पनि अकर्शित्न हुने गर्छन।२. मिथुन राशिका महिलाहरु मित्रवत व्यवहारमा महिर रहने भएका कारण आकर्शत रहने गर्छन।३. अरुको भावना बुज्न सक्ने क्षमता भएका यस राशिका महिलाहरु प्रेम जीवनमा राम्रो भूमिका निभाउन सफल रहन सक्ने व्यक्तित्वले भरिपुर्ण रहने गर्दछन्।
वृश्चिक राशि (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू) १. अरुको भावनाको कदर गर्ने यस राशिका महिलाहरु प्रेम जीवनका लागि अति शोभनीय रहने गर्छन्। साथै बोल्ने शैलीका कारण पनि सबैको नजर यस राशिका महिला माथि रहने गर्दछ।२. भौतिक सुन्दारता नरुचाउने पुरुषहरु वृश्चिक राशी भएका महिला पर्ने गर्छन्। भौतिक सुन्दरता बाहेक यस राशिका महिलाहरुसंग फरक आकर्षण रहने गर्दछ।३. यस राशिका महिलाहरु ज्ञानी रहने गर्छन भने एकपटक सम्बन्ध स्थापित गरे पछी अडिक रहने गरेका कारण प्रेम जीवन सफल बनाउन विशेष भूमिका खेल्ने देखिन्छ।